Maitiro ekuvhura wega muchivande neanti-yekutevera kudzivirira Linux Vakapindwa muropa
Maitiro ekuvhura wega muchivande ne anti-yekutevera dziviriro
Mushure me espionage zvinonyadzisa zvakasangana mumakore achangopfuura, kuvanzika uye kuchengetedzeka zvinoita kunge zvave zvemufashoni. Ndicho chikonzero nei mamwe maturusi akazvarwa patsva ayo anotibatsira kufamba nenzira zvakanaka kana kuvandudza zvakavanzika zvedu. Zvinenge zvese zvatinoita zvinoteverwa, kungave kwemubereko kana kuwana ruzivo rwekutengesa kune vatatu mapato. Izvi hazviitwe chete kana uchitsvaga mambure, asi zvakare kana isu tichishandisa mashandisiro kana kutamba mitambo.
Muchikamu chino tichaedza kuita dzidziso yakazara yemafambiro emambure nenzira yakachengeteka uye yakavanzika. Izvi zvinoitwa nekubvisa kutsvaga pamwe nezvimwe zvishandiso uye mafomula atinozoona mune rese dzidziso. Rangarira kuti pane network pane nzira dzakawanda dzekutevera kuita kugara uchiongorora zvakakwana kufamba kwese, kwete chete kuburikidza nenhoroondo kana makuki, asi zvimwe zvakanyanya.
1 Nhanganyaya uye akakosha pfungwa
2 Anti-yekutevera uye zvakavanzika mhinduro
2.1 Delete cookies
2.3 Firefox Anti-Kutevera
2.5 Tor uye VPNs
Nhanganyaya uye akakosha pfungwa
Iyo yekutevera iyo yatinotumira pane iyo network, chimiro chekutevera icho chinoshandiswa pazvinangwa zvakasiyana. Semuenzaniso, makuki anoshandiswa nenzvimbo kuti uzive kwawakambo bhurawuza kana nemakambani ekushambadza (Google pachayo) kupa kushambadza zvinoenderana nezvawatsvaga. Wakamboona here kuti kana iwe ukatsvaga neGoogle, "zvisinganzwisisike" kushambadzira zvine chekuita nekutsvaga ikoko kunoonekwa pane mawebhusaiti iwe aunowana gare gare?
Semuenzaniso, kana iwe Google "materevhizheni", zvichikwanisika, kana iwe ukawana chero webhusaiti, chero iri, izvo kushambadzira kana chikamu chazvo chichaendeswa kutengesa materevhizheni. Uku kushambadzira kwakangwara kunonyanya kushanda uye kwakagadzirirwa mushandisi wega wega, zvichibvumira mhedzisiro iri nani. Asi kuti izvi zvikwanisike, iyo ad system inofanirwa kuziva yako kubhurawuza kana yekutsvaga nhoroondo.
Mumwe muenzaniso watinawo iyo yewebhu-yekutevera, yekutarisisa kunoitwa newebhu kwatinosvika uye panowanikwa data senge nguva yekuwana, Chibviro, bhurawuza yatinoshandisa, mashandiro atinobva, nezvimwewo zvakanyorwa. Izvi zvinogona kubatsira manejimendi uye vatenzi vewebhu, asi zvakare zvinofungidzira kuti data rakagovaniswa pasina mvumo yako, nekuti hazvikupe mukana mudiki wekuramba kuigovana.
Cookies ndeimwewo nyaya, uye nguva pfupi yadarika mutemo wavo wakachinjwa uye ungangodaro wakacherekedza kuti kana uchiwana mawebhusaiti mazhinji meseji inoita sekuti unofanira kubvuma kana kuvhara nezvecustomer cookie's saiti. A cokkie kana cookie, iri diki faira rine ruzivo yemushandisi iyo bhurawuza inochengeta kuitira kuti webhu igone kubvunza chiitiko chekare chemushandisi. Ivo anoshandiswa ese maviri kudzora vashandisi, kuunganidza ruzivo nezve kubhurawuza maitiro, nezvimwe. Izvo zvine njodzi ndezve izvo zvakagovaniswa nevechitatu mapato uye ndeavo anoshandiswa kushambadza sezvatakataura mundima dzapfuura.
Uye sekunge izvi zvaive zvisina kukwana, hatiregi kusiya ruzivo nezvedu mumasocial network, uye mamwe marekodhi ewebhu. Isu tinoverenga hupenyu hwedu uye tinohuongorora nemifananidzo, tichitaura zvatinoita nguva dzese, vatinaye, kwatiri, mazita edu, kunyangwe nhoroondo yekurapa. Ruzivo rwakanyanya runogona kushandiswa zvine hukasha kutirwisa. Kufanana nemutikitivha mafirimu, zvese zvaunotaura zvinogona kushandiswa kupokana newe ...
Hurumende kana ISPs (Vanopa Internet seTelefonica, Vodafone, Ono, Jazztel, Orange, ...) vane nhoroondo yakazara yekubhurawuza kwedu, ivo vanoziva zvatinoita uye ivo vanongofanirwa kutarisa nhoroondo yakanyoreswa pamaseva kuti vazive zvatinoita , kunyangwe tikadzima nhoroondo yedu yekufambisa, makuki, nezvimwe. Izvi ndizvo zvinoshandiswa nedzimwe nyika kurwisa piracy, nekuti iyo ISP inogona kuziva kana iwe wawana zvisiri pamutemo kurodha mawebhusaiti kana kushandisa BitTorrent, aMule kana zvakafanana zvirongwa zvekurodha ...
Kune mamwe makambani kana mapato echitatu anosanganisira kodhi pane yega yega webhusaiti yekurasa iyo data iyo ISPs kana hurumende vanokwanisa kuwana vozoita nayo…. izvo? Pakupedzisira, kubvisa kwedu internet trace kuri pachena kuoma Uye kunyangwe paine makambani akazvipira kune izvi, handifunge kuti zvakachipa kana nyore kuzviitira mumwe mushandisi asina ruzivo rwakakwira. Naizvozvo, isu tichaedza kusiya tushoma sezvazvinogona uye ndizvo zviri kunyorwa nezvinyorwa izvi, kunyangwe isu tisingafanire kuve paranoid, asi nekuda kwezvikonzero zvehunhu, tine kodzero yekuvanzika kwedu.
Anti-yekutevera uye zvakavanzika mhinduro
Tiri kuzotsanangudza dzakateedzana mhinduro dzekudzivirira kuteedzera uye kufashukira pawebhu zvakachengeteka uye zvisingazivikanwe. Sezvawaona muchikamu chakapfuura, zvakavanzika hazvimo pawebhu, asi isu tinogona kuita chimwe chinhu kuti tisanyanya kuzivikanwa. Ticharondedzera kubva pane yakakosha uye isinganetsi maitiro kusvika kune epamberi uye inoshanda.
Mhinduro yakapusa iri bvisa makuki edu uye nhoroondo pese patinovhara browser redu, izvi zvinotibatsira. Mamwe mabhurawuza, akadai seSafari pane Apple zvishandiso kana Microsoft yeInternet Explorer, haana sarudzo dzekudzima makuki otomatiki kana uchibuda, kunyangwe vaine sarudzo dzekuadzima nemaoko. Izvi hazvitinetse zvakanyanya, sezvo yedu portal iri Linux uye isu hatishandise aya mabhurawuza. Kudzima makuki:
Google Chrome / Chromium: enda kuZvirongwa, tinya "Ratidza mafambisirwo epamberi", wozoenda kune Chakavanzika chikamu wobva wadzvanya bhatani reZvirongwa Ikoko tinoshandura Cookies sarudzo ku "Sevha data remuno kusvikira ndavhara bhurawuza."
Mozilla Firefox uye zvigadzirwa: tinoenda kuKusarudza Menyu, tinobaya pane zvakavanzika tebhu, muChikamu cheNhoroondo, tinosarudza "Zvirongwa zvakagadzirirwa" uye tinoshandura sarudzo yekuchengeta makuki ku "Kusvikira ndavhara Firefox".
Ose maviri Google Chrome neMozilla Firefox, uye mamwe mabhurawuza akafanana atinoshandisa paLinux, inopa a incognito modhi kana kuvanzika kwega. Nezve izvi isu tinowana chimwe chinhu chakafanana neicho chakatsanangurwa muchikamu chakapfuura, ndiko kuti, kuti mawebhusaiti haakwanise kuwana kwedu mareferenzi uye trace yedu haina kuchengetwa munhoroondo. Asi zvinofanirwa kujekeswa kuti izvi hazvireve kuti iyo nzira kuburikidza nemambure haina kuzivikanwa. Zvayo:
Google Chrome / Chromium: Isu tinoenda kune iyo Zvishandiso menyu uye tinya pa «Nyowani isingazivikanwe hwindo», izvi zvichavhura hwindo idzva neiyi nzira yakachengeteka yekutarisa. Iko zvakare kune nzira pfupi yekhibhodi nekudzvanya iyo Ctrl + Shift + N makiyi.
Mozilla Firefox uye zvigadzirwa: muFirefox nevamwe, haina kunzi incognito modhi, asi "Kuongorora Kwega". Isu tinoenda kune iyo Zvishandiso menyu uye tobva tadzvanya pa «Nyowani yakavanzika hwindo». Kana iwe uchida nzira ipfupi, tinya Ctrl + Shift + P.
Mozilla ikambani yakagara ichitarisira yemahara software uye kuvanzika uye zvido zvevashandisi. Neichi chikonzero, ivo vanoramba vachishanda, dzimwe nguva vachipesana nemunhu wese uye neakawanda mhinganidzo, kuita kuti kubhurawuza kuve kwakavanzika uye kwakachengeteka sezvinobvira. Firefox kubva mushanduro 43 futi inosanganisa nzira yekuvharira yechitatu-bato yekutevera. Iyo inoshandisa iyo yakasarudzika rondedzero yakapihwa neDisconnect.me, kunyangwe iyo inogona kuchinjwa.
Asi zve shandisa anti-tracking kudzivirira, isu tinofanirwa kuenda kumaturusi menyu, tozoenda kuZvaunoda, uye Zvekuvanzika, kuti tiite "Taurira masayiti kuti asakutevere" uye "Shandisa dziviriro pakuteedzera mune zvakanakira wega." Kuti tishandure runyorwa rwekuvharira, tinogona kuenda kuMenyu yezvishandiso (iwe unoziva, iwo matatu mabara ari kumusoro kurudyi), Zvaunoda, wobva waenda kune Yakavanzika, bhatani re "Chinja Rondedzero Yezvivharo" uye sarudza rondedzero yema block yatinoda. Isu tinochengetedza shanduko uye tinogamuchira. Izvo zvinotanga kushanda mushure mekutanga zvekare Firefox.
Iko kune zvinowedzerwa-zvese zviri zviviri Chrome (Chromium) uye Firefox (uye zvigadzirwa), izvo zvatinogona kuisa kubva kune iyo plug-in uye yekuwedzera-kuchitoro izvo izvo maviri mabhurawuza anotipa kwatiri. Kuisirwa kuri nyore, isu tinowana iyo Chitoro chebrawuza redu uye neinjini yekutsvaga isu tinotsvaga iyo yekuwedzera yatinoda uye tinya pabhodhi rekuwedzera kana kuisa Ndezve ma-add-ons anozotibatsira kuchengetedza zvakavanzika:
Adblock: inokurudzirwa kwazvo kuvharidzira kushambadza, saka hatisi kungodzivirira zvinotsamwisa pop-up shambadziro dzinotipedzera nguva, asi zvakare tidzivise kuongorora kwemamwe mapeji uye mabhatani enharaunda.
Ghostery: Iyo ndeimwe yeanodiwa, uye kunyangwe nekukasira iyo isingavharire masayiti uye iwe unofanirwa kuigadzirisa, inoshanda kwazvo. Nayo tinodzivisa kupa ruzivo kune vatatu mapato patinoongorora.
DoNotTrackMe: inokutendera kuti uvhare uye utarise huwandu hwenzvimbo dzakadzivirirwa kuti uchengetedze. Kunyangwe iine mashoma sarudzo pane Ghostery, inoshanda kwazvo, kunyangwe ichigona kunetsa kana uchivhara hwindo ...
Usateedzere Kuwedzera: Izvo hazvishande chaizvo, asi zvakanaka kudzivirira kuti iwo masayiti haateedzere kana kutiteverera. Ini ndoti hazvishande nekuti zvese zvinoenderana nekuti ndiani anopa kushambadza, nekuti chaizvo izvo zvisina kunetsa zvichazovharwa uye chinonyanya kukuvadza hachizovharwe ...
Dzinga: Zviri nyore kwazvo kushandisa titende kune yayo yakapusa interface, uye yakafanana chaizvo neGhostery kana DoNotTrackMe, kunyangwe iine mukana, uye iri mukana wekumanikidza HTTPS pane ese mawebhusaiti kuvandudza chengetedzo.
Tor uye VPNs
Asi kana isu tichida kutora rimwe danho rehunyanzvi mukutsvaga zvakavanzika, saka tinofanirwa kushandisa dzimwe nzira dzakaomarara. Uye imwe yesarudzo dzakanakisa ndeye Tor uye Tor Browser (yakavakirwa paFirefox). Kunyangwe isu tichigona kuchinjisa Chrome neFirefox, pamwe nemamwe mabhurawuza ekushandisa Tor, zvinogona kuve nyore kushandisa Tor Browser yakanangana, nekuti iri vhezheni yakashandurwa yeFirefox kuigadzirisa iyo Tor uye nedzimwe dzinonakidza dzekurwisa-mhinduro mhinduro.
Kunyangwe Tor zvakare unogona kutiendesa kune yakadzika webhu (Rangarira kuti netiweki yakafanana nechando chando, uye kana iwe uchitsvaga paGoogle nedzimwe injini dzekutsvaga, iro rakakura denga rinomiririra chete muromo weiyo iceberg, asi kune zvakawanda zvakanyudzwa muInternet yakadzika iyo isiri isu tese tinokwanisa kuwana Tor), netiweki yakasviba kwaunogona kuwana zvinhu zvikuru uye zvinhu zvinotyisa, haufanire kupinda mudambudziko kana iwe usingade. Asi hei, uyu ndiwo mumwe musoro watisingapinde ...
Kushandisa Tor kuenderera kunogona kusagadzikana, asi kunogona kukodzera kwazvo kufamba pasina kuoneswa panguva dzakati. Imwe sarudzo ndeye kushandisa VPN (Virtual Private Network) kana Virtual Private Network, mune iyo traffic yakavharidzirwa uye ichave isinganzwisisike kune vechitatu mapato uye kunyangwe kune ISP. Zvinoita sekunge takagadzira zano rakavanzika paInternet, mugero weVPN watinogona kuwana nedzimwe nzira dzakareruka dzekugadzira maVPN seAstrill (inodhura uye ine hurongwa hwekubhadhara pamwedzi pamadhora matanhatu, pasina miganho yekurodha uye multiplatform). Kunyangwe izvi zvichireva kuti mamwe makomputa chete mukati kana ane mukana weiyo network anogona kuiona.
Naizvozvo, zvakachipa uye zvinoshanda kushandisa Tor, sezvo iri yakavhurwa sosi uye yemahara, nezvose zvatinotsvaga. Kuisa uye kuitora uye kumhanya paLinux, tevera nhanho idzi:
Dhawunirodha kubva pane iyi link
Iye zvino handei kudhairekitori downloads:
Isu tinoburitsa tarball, semuenzaniso:
Iye zvino taisa, kunyange izvi zvichisiyana:
Vhura Tor Browser uye iwe uchaona kuti kutaridzika kwayo kuchiri kungofanana neFirefox, saka unenge usina kana dambudziko nekuishandisa. Kana iwe uine anoshanda Firewall pane yako system, iwe ungangoda kumisikidza madoko ekubatanidza kubva Tor Network Zvirongwa. Iwe unogona zvakare kumisikidza iko kushandiswa kwema proxy maseva uye nedzimwe sarudzo dzepamberi kana uchizoida. Uye usakanganwe, kuti kuve kwakavakirwa paFirefox, inogona zvakare kushanda nemawedzero, kuti iwe ugone kuisa iwo atakamboona, semuenzaniso NoScript ...
Usakanganwa kusiya zvirevo zvako uine kusahadzika, mipiro, nezvimwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Maitiro ekuvhura wega muchivande ne anti-yekutevera dziviriro
Iwe unogona here kugara uchiisa bhurawuza mune incognito modhi, ndiko kuti, gara wakavhurika mune incognito modhi?
MuFirefox unofanirwa kuenda kumabhawa matatu - Zvaunoda -Privacy uye tsvaga "Gara uchishandisa yakavanzika nzira yekuvhura"
Linuxeros, kana iwe uchida kuvanzika uye kusazivikanwa, usaomese hupenyu hwako !!!
Ingoshandisa Tail (kubva Live USB) kana whonix seanoshanda masystem.
(Ehe, usaite hupenzi hwekupinda muFacebook, Google kana zvimwewo, nekuti nzvimbo idzi dzinogona kukutevera kunyangwe wavhara musangano).
uyezve, dzinga Izvo zviri kumusoro kubva kunhare yako !!!!
Kune emahara uye emahara software dzimwe nzira dzinokupa churu kutendeuka maererano neyakavanzika maererano ne "ANTI-isingazivikanwe-yakavanzika" Chii Chiri kumusoro !!
Semuenzaniso iyo App Signal.
(… Yakakurudzirwa, nenzira!)
Pindura kuna Ambuya
norma noemi villarreal akadaro
Maitiro ekutarisa incognito pane yakadzika internet pasina kusanganisira enhau enhau maakaunzi
Ini handizive zvakawanda nezve izvi
Pindura kuna norma noemi villarreal
KDE Neon, chirongwa chaRiddell chekupa yakanakisa yekubatanidza distro ne KDE